Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Lufthansa Group hanakarama mpiasa vaovao maherin'ny 4,500 amin'ny tsenany an-trano amin'ny taona 2020
Amin'ity taona ity ny Lufthansa Group dia hanakarama mpiasa vaovao maherin'ny 4,500 ao Germany, Aostralia sy Suisse araka ny zava-misy ankehitriny; amin'ireo dia mpiasa 3,000 no hatao any Alemana. Izany dia misy ny fanendrena indray amin'ny toerany noho ny fiovan'ny toetr'andro ary amin'ny tranga sasany dia mitombo ny asa. Ny ifantohan'ny fandraisana andraikitra kasaina hatao any amin'ireo firenena DACH dia "an-tany" miaraka amin'ny toerana 2,500. Manodidina ny 1,300 ny mpikarakara sidina vaovao horaisina manerana ny Vondrona Lufthansa.
Mpiasa vaovao manodidina ny 1,000 no voatendry horaisina amin'ny marika Lufthansa fototra amin'ny taona 2020. Mpiasa mpanatrika sidina 450 fotsiny no hanomboka ny fiofanana ao amin'ny toerana misy an'i Munich. Ankoatr'izay, mpiara-miasa manidina 40 no hiditra ao amin'ny Lufthansa CityLine ao amin'ny hub Bavarian. Ny orinasan-dry Lufthansa any Munich dia mikasa ny hampiasa mpiasa eo amin'ny fitantanana maro. Ankoatr'izay, mpiasa 100 eo ho eo amin'ny fitantanan-draharaha no kasaina hatao ao Lufthansa, miaraka amin'ny hetsika 300 any an-toerana. Ny sidina fiaramanidina crane koa dia mitady kandidà amin'ny sehatry ny IT sy ho an'ny manam-pahaizana hafa amin'ity taona ity.
Ny fifantohana amin'ny IT izay napetraka tamin'ny taon-dasa dia mitohy manerana ny vondrona Lufthansa iray manontolo, indrindra amin'ireo mpanome tolotra IT ao an-trano. Ohatra, ny Lufthansa Industry Solutions dia mitady hanakarama mpiasa vaovao 350 hanatrarana ny filan'ny serivisy informatika ao anatiny sy ivelan'ny Vondron'ny Lufthansa Group - manam-pahaizana manokana momba ny teknolojia ary koa ireo manam-pahaizana manokana manana fahalalana manokana momba ny indostria. Lufthansa Systems dia mitady manam-pahaizana manokana momba ny IT amin'ny karazany rehetra eo amin'ny toerany iraisam-pirenena ihany koa, miaraka amina planina hanakaramana olona 200 manerantany.
Ny Lufthansa Group dia mitohy ho iray amin'ireo mpampiasa malaza indrindra any Alemana ary namerimberina azy ho iray amin'ireo mpampiasa telo voalohany tsara indrindra amin'ny ivon-toeram-pikarohana malaza YouGov malaza. Ity laza ity dia hita taratra amin'ny isan'ny mpangataka toy ny tamin'ny 2019 ihany, mihoatra ny 190,000 ny fangatahana ivelany voaray tamin'ny alàlan'ny sehatry ny asa.
“Ny tombony ifaninanay indrindra dia ny mpiasanay izay manome ny tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika sy ny orinasanay isan'andro amin'ny fanoloran-tenany sy ny fahaizany. Amin'ity taona ity dia hitady talenta voatokana indray isika eo amin'ny sehatry ny asa. Miteny ho azy ny karazan'asa isan-karazany ananantsika, "hoy i Michael Niggemann, izay notendrena ho amin'ny Birao Mpanatanteraka ao amin'ny Deutsche Lufthansa AG nanomboka ny 1 Janoary 2020 ho Lehiben'ny HR sy Legal.
Maherin'ny 500 ny mombamomba ny asa samihafa ao amin'ny Vondrona Lufthansa, miaraka amin'ireo sampana sy mpikambana ao aminy 550 mahery manerantany. Ny vondrona fiaramanidina amin'izao fotoana izao dia manolotra mpianatra antonony 28 amin'ny toerana 16 samy hafa any Alemana, Austria ary Suisse. Misy ihany koa 13 fandaharam-pianarana roa sy programa mpiofana 4. Raha atotaly, mpiasa karama vaovao 500 eo ho eo ho an'ny zandriny no kasaina hatao amin'ity taona ity, ao anatin'izany ny mpiofana 50. Raha momba ny talenta tanora, ny Lufthansa Technik Group, miorina ao Hamburg, dia mialoha mialoha ny sehatra: amin'ity taona ity, misy fahaiza-manao eo amin'ny toerana 270 eo amin'ny sehatry ny fampianarana na fandaharam-pianarana roa tonta amin'ny sehatry ny haitao fiaramanidina, indostria na logistika. . Amin'ny ankapobeny, Lufthansa Technik Group dia manomana mpiasa vaovao manodidina ny 1,200 eo amin'ny tsenan-tranony.
SWISS dia mamorona asa mihoatra ny 300 miaraka amin'ny fampidirana andiany ny B777
SWISS dia mikasa ny hanakarama mpiasa vaovao maherin'ny 1,000 amin'ity taona ity, izay hanatrika ny fampiofanana 500 ho avy ny mpanamory sidina. Miaraka amin'ny fanatontosana fiaramanidina roa lava Boeing 777 maharitra, ny sidina Soisa dia mamorona asa mihoatra ny 300 ao amin'ny kabine, koba-jofo ary faritra teknika manerana ny taona kalandrie. Ny fiaramanidina maharitra lavitra noho izany dia mitovy amin'ny orinasa kely sy salantsalany, miteraka asa ho an'ny mpanamory fiaramanidina 25, teknisiana 10 ary mpiasa 120 ao an-tranony.
Noho ny fepetra fanarenana anatiny sy fitehirizana vola, ny Brussels Airlines, Eurowings ary Lufthansa Cargo dia mametraka fihenam-bidy ankehitriny; ankanavaka. Austrian Airlines dia hampihena ny vidiny noho ny fanavaozana ny fifaninanana. Na eo aza izany dia mbola mikasa ny hanolotra asa vaovao manodidina ny 200 any amin'ny toerana misy an'i Vienna ny zotram-piaramanidina amin'ny taona 2020. Izany no zava-misy, ohatra, eo amin'ny sehatry ny IT, satria ivon-toerana tsara asiana vondrona Lufthansa Group vaovao no hatsangana ao Wina. Ny Austrian Airlines koa dia manakarama talenta tanora: mpianatra am-pianarana 20 sy mpianatra 13 total ho an'ny fandaharam-pianarana roa "AirCelerate".